China Ball Mill na-emepụta na ndị na-ebu ya | Mets
Ngwongwo blọl nwere akụkụ nri, akụkụ nri, akụkụ na-agbagharị, akụkụ nnyefe (onye na-ewelata, obere ihe nnyefe, moto, njikwa eletriki) na ihe ndị ọzọ. Ejiri ígwè a wụrụ oghere mee ya, a ga-agbanwe ihe mkpuchi ahụ, a na-emekwa ka ihe ndị na-agagharị agagharị bụ ezé ndị na-agbagharị agbagharị. Gbọmgbọm nwere mbadamba mkpuchi nke na-eguzogide ọgwụ, nke nwere nguzogide ejiji dị mma. Igwe ahụ kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya.Ball usu nnabata gụnyere cylinder, ahụ cylinder bara uru lining mere nke na-eyi na-eguzogide ọgwụ ihe, nwere na ịnọgide na-enwe ya n'usoro cylinder agba amị, nwere chụpụrụ akụkụ, dị ka moto, na draịva gia, pole, triangle, wdg.
About akpọ agụba akụkụ, n'ozuzu bụghị isi mmiri, mmiri na ndepụta ọgwụgwụ uzo mmiri na esịtidem ịghasa ha gburugburu agụba, nwere ike kwuru na-agbapụta n'ahụ ọgwụgwụ akụkụ ịrụzu ọnụ na esịtidem ịghasa nwere ike na-akpọ ha gburugburu agụba.
Na mgbakwunye, na ngwa inyeaka nke njedebe na-agbapụta, ọ bụrụ na ejiri ihe na-ebugharị gburugburu, a ga-enwe akụkụ a na-akpọ eriri gburugburu na akụrụngwa ahụ, mana na -ekwu okwu, ọ bụghị akụkụ nke igwe ihe eji agba bọọlụ. Akọrọ obi ụtọ na nkume igwe nri na mmiri grate bọl na nkume igwe nri nwere ike họrọ dị ka ihe onwunwe na drainage mode. Energy ịzọpụta bọl na nkume igwe nri, na akpaka kwado okpukpu abụọ n'usoro centripetal * Tụkwasị na ala agba, na-agba ọsọ na-eguzogide bụ obere, ike ịzọpụta mmetụta bụ ịrịba ama. A gbakwunyere akụkụ ahụ nke gbọmgbọm nke mbụ na cone cylinder, nke na-abawanye olu dị irè nke igwe nri ma na-eme ka nkesa nke ọkara na ọkpọkọ nwee ezi uche. Ngwaahịa a na ọtụtụ-eji na-abụghị ferrous metal, ferrous metal, non-metal beneficiation ubi, chemical ụlọ ọrụ na ụlọ ihe ụlọ ọrụ.
Ihe ntinye bọl:
A) emeputara atumatu ntinye dika ihe eji aru oru nke onye oru ma gha etinye ya na uzo, uzo na oghere nke eserese a;
B) ala ụgbọ elu nke fuselage kwesịrị ịbụ ihe siri ike, na ịdị larịị nke ala ala nke cylinder adịghị elu karịa 1.5 / 1000 mgbe nhazi nhazi.
A) wepu ihe site na isi nke akụrụngwa nrụnye, ọkachasị mgbidi dị n'ime oghere ekwesịghị inwe ntụ, mmanụ, mmiri na mmiri ndị ọzọ;
B) mgbe ịtọpụchara ngwugwu ngwongwo ahụ, a ga-ebugharị isi injin ahụ n'ọnọdụ nrụnye ya na ụlọ ọrụ na-ebuli elu kwesịrị ekwesị (kreenu / forklift);
C) tinye akụrụngwa ahụ n'ọnọdụ, arịlịka arịlịka arịlịka, yana "ụkwụ dị ndụ" nke eriri na-enweghị usoro ga-agbado ya na chassis nke okpokoro ahụ mgbe agbanyechara ya na chassis nke etiti ahụ, wee nwee ike ịmegharị nke abụọ;
D) mgbe echichi nke 24 awa ciment ike, ọ ga-eji na ikesiike na aku loading igwe;
E) inweta ikike;
F) nyocha nyocha na mgbazi nke nkasi obi;
G) a na-etinye kabinet eletriki n'ime ụlọ injinia inyeaka na-enweghị mkpa ịwụnye ala.
2. Ọrụ nyocha:
Ngwunye ihe igwe egwu zuru ezu, nyocha ahụ, nwere ike ịbụ nnwale nnwale efu, inye ndị ọrụ bọọlụ bọọlụ ọrụ site na ndị na-arụ ọrụ bọọlụ nwere ọgụgụ isi kwesịrị ịrụ ọrụ, igwe ihe eji egwu bọọlụ ma na-agbaso usoro ọrụ nchekwa.
(1) oge ịgba ọsọ nke arụghị ọrụ ga-abụ ihe na-erughị awa 12-24, na nsogbu ndị a na-arụ ọrụ ga-edozi n'oge.
(2) arụghị ọrụ nke inye ọrụ ka ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, enwere ike ịrụ ya mgbe nnwale nnwale ahụ na-agba ọsọ n'akụkụ ọ bụla, a ga-arụ ọrụ ọrụ dịka ọnọdụ nke ihapu na nri, zere bọl na-enweghị isi na eriri cylinder. na mmebi.
A) gbakwunye ihe ndị kwesịrị ekwesị na 1/3 nke bọọlụ nchara (oke kachasị nke igwe bọl) iji gbalịa 12 ruo 24 awa.
B) gbakwunye na 2/3 nke ego bọọlụ iji gbaa 24 ruo 48 awa.
C) dị ka ọnọdụ ịgbapụ bọl, mmepụta nke ngwaahịa ruru eru, na-ezo aka n'otu ụdị igwe igwe igwe na-ebu oke ibu, chọpụta oke bọọlụ bọọlụ igwe igwe bọọlụ ahụ, maka ihe na-erughị awa iri asaa na abụọ.
(3) mmụba nke ibu dị n'elu na ogologo oge ule na-agba ọsọ kpebisiri ike dabere na ọnọdụ ndị na-agba ọsọ nke gear nke nha nha na reducer gear (ịrị elu nke okpomọkụ, mkpọtụ, kọntaktị elu ezé, wdg). Tupu izi ezi kọntaktị nke ezé ezé anaghị emezu ihe ndị a chọrọ, ọ gaghị arụ ọrụ zuru oke.
(4) usoro jụrụ oyi na lubricating kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ nnwale ahụ, na ọnọdụ okpomọkụ nke isi na-ebu, nnyefe nnyefe na onye na-ewepụta ihe kwesịrị ịdị mma.
(5) mgbe itinyechara 2/3 nke ule bọọlụ nchara ruo 24 ruo 48 awa, lelee ma mee ka mkpọchi ahụ niile sie ike.
(6) a ghaghị iji nlezianya dekọọ ọrụ ikpe ahụ.
Gwakọta, egweri, bọl igwe na-ejikarị eme ihe maka ihe seramiiki bụ ngwa dị mkpa maka mmepụta nke ụdị ngwaahịa seramiiki dị iche iche, igwe ahụ na-eji nrụgide njikọ, belata mbido ugbu a, a na-ekewa usoro ya n'ime ihe dị iche na nkewapụrụ iche. Site na draịvụ v-belt, otu-ogbo ma ọ bụ okpukpu abụọ, nke nwere obere ikike ike nwere onwe ya.
Nke gara aga: Hydrocyclone
Osote: Aka uwe